Dhismaha Dhismaha Dhul gariirka Istanbul | RayHaber
[06 / 01 / 2020] Wadashaqeynta TÜVASAŞ ee Mashruucyada Nidaamka Raadinta Iftiinka Sakarya	54 Sakarya
[06 / 01 / 2020] Farriinta ka socota Shaqaalaha Ankara Sivas Railway	06 Ankara
[06 / 01 / 2020] Iskuday la’aanta ayaa kusii socota khadka tareenka ee Samsun Sivas .. Tareenka Tijaabada ama Tareenka Kormeerka?	55 Samsun
[06 / 01 / 2020] İmamoğlu: Mashruuca Kanal İstanbul Ma Noqon Karo 'Waxaan Sameeyay Mashruuca'	34 Istanbul
[06 / 01 / 2020] Madaxweyne Erdogan ayaa ku dhawaaqay Channel Istanbul	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulPlatform Dhulgariirka Istanbul
04 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Gobolka Marmara, Warqad Hordhac ah, TURKEY
Dhismaha dhul gariirka Istanbul ayaa la sameeyay
Waxaa la aasaasayaa Qalab Dhulgariir oo ka socda Istanbul; Aqoon-isweydaarsiga Dhulgariirka oo ay soo qabanqaabisay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, go'aamo muhiim ah ayaa laga gaadhay Istanbul. 'Nabdoonaanta Dhulgariir ee dhismayaasha, isbedelka magaalooyinka, sameynta xarumaha xarumaha musiibada ee degmooyinka, unugyada dowladdu waxay ka shaqeeyaan isuduwidda' soo jeedinta. Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee IMM Mehmet Çakılcıoğlu wuxuu cadeeyay in Dhismaha Dhul gariirka Istanbul in la abuuri doono si looga dhigo daraasada dhulgariirku mid iskaashi leh, daah furnaan iyo siyaasad ka sarreysa.
Aqoon-isweydaarsiga Dhulgariirka, oo ay soo qabanqaabisay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul bishii Diseembar 2-3 ee Xarunta Kongareeska ee Istanbul, ayaa ku dhammaatay kulan qiimeyn ah halkaas oo laga wada hadlay dhibaatooyinka iyo mashaaricda xalka. Intii lagu guda jiray aqoon isweydaarsiga labada maalmood, dhulgariirkii suurta galka ahaa ee ka dhacay magaalada Istanbul waxaa si aad ah loo qiimeeyay.
“IMM, URBAN TRANSFORMATION INC. Miyey SAAMIGA "
600, oo ka kooban aqoonyahanno heer qaran iyo caalami ah, daneeyayaasha qaybta, aasaasyada, ururrada iyo wakiillada NGO-yada, ayaa xiiseynayey 'miisaska xalka' halkaasoo kaqeybgalayaashu fikradooda la wadaageen.
Miisaska, lixda mowduuc ee mowduucyada lagu sharraxay ee ah 'Qorshaha Qaab-dhismeedka Sendai', kaas oo Xarunta Qaramada Midoobay ee Yaraynta Khatarta Musiibada (UNDRR) ay sidoo kale tixgalineyso. Miisaska doodda, qiimeyn ayaa laga sameeyay konton mowduuc sida dhul gariir, waxyeelo jireed, isbadal magaalooyin, burburin bulsheed, hidaha iyo dhaqanka, ururada samafalka iyo iskaa wax u qabsada, iskuduwida xaaladaha degdegga ah.
Aqoon isweydaarsiga, qaab dhismeedka dhismayaasha nabdoon iyo kuwa dhawaaqa leh, waxaa la isla gartay in la dardar geliyo isbadalka magaalada iyo in la helo awood wax looga badalo IMM. Khubaro, Ururinta Wax Ka Beddelka Inc. oo ay soo saartay IMM. Waxay soo jeediyeen soo jeedinno.
Talooyin kale oo aqoon isweydaarsiga ka mid ahaa ayaa ahaa sameynta nidaam maareyn deg-deg ah oo heer degmo ah. Khubaradu waxay tilmaameen sida ay lagama maarmaanka u tahay isku xirnaanshaha u dhexeeya dhammaan waaxaha gobolka.
ÇAKILCIOĞLU: WAA INAAN BADBAADI DOONNAAN DHULKA ISTANBULKA ISTANBULKA
Khudbadii xiritaanka iyo qiimaynta ee uu sameeyay Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Im. Mehmet Çakılcıoğlu, ayaa sheegay in aqoon isweydaarsigu ahaa mid wax soo saar leh. Çakılcıoğlu wuxuu sheegay in shaqooyinka noocan oo kale ahi ay sii jiri karaan si ay runti wax soo saar u noqdaan. Waxaan rabnaa inaan ku lug lahaano dhammaan daneeyayaasha ku sugan Istanbul qaab hufan oo kaqeybgal ah. Madaxweynahayaga, Mr. Tani waa hawlaheena ugu horeeya ee la jaan qaada qorshaha abaabulka dhulgariirka ee uu bilaabay Ekrem İmamoğlu. Tani way sii socon doontaa. Maqaalka koowaad ee qorshaha abaabulka dhulgariirka, waxaan kaga hadli doonnaa isbadalka magaalooyinka iyadoo diirada la saarayo. Intaas waxaa sii dheer, waxaan dhameystiri doonnaa howsha wada hadalka iyo guryaha, kuwaas oo ah mowduuca laga wada hadlayo. Waxaan diirada saari doonaa howlaha tababarka. Waxaan siin doonaa tabobarro wacyigelin tabaruciinta laga bilaabo shaqaalaha IMM.
Waxaan ka fekereynaa qaab kale iyo tamar aan helnay labadii maalmood. Waxaan qorsheyneynaa inaan dhisno dhul gariir. Waxaan ka fikirnaa urur siyaasadeed-sarre, hufnaan iyo kaqeybgal oo ku jiri doona hay’ado badan oo dowladeed, NGO-yo, jaamacado iyo waaxda gaarka loo leeyahay. ”
MASHRUUCA KU SAABSAN MASHRUUCYADA
Waaxda Maamulka Magaalada Caasimadda ah ee Maareynta Halista Magaalooyinka iyo Horumarinta Magaalooyinka, Tayfun Kahraman, oo qiimeyn ku sameysay websaydhka Degmooyinka Magaalada Istanbul ee ku saabsan Aqoon-isweydaarsiga Dhulgariirka Magaalada Istanbul, ayaa bixiyay macluumaadka soo socda:
“Ujeeddada aqoon isweydaarsiga dhulgariirka Istanbul wuxuu ahaa in talo cusub laga helo wakiilada hay'adaha, ururada aan dowliga aheyn iyo jaamacadaha ka dambeeya daraasadaha hadda jira iyo in la tijaabiyo khariidadkeena wadada. Aqoon isweydaarsigan, waxaan si faahfaahsan uga wada hadalnay dhibaatooyinka, xalalka iyo mashaariicaha la xiriira dhulgariirkii Istanbul. Dhamaadka maalinta, dhibaatooyinkeena ugu waaweyn iyo mashruucyada la xiriira ayaa soo baxay. Annaga oo ah IMM, waxaan fileynay in dhammaan kaqeybgalayaasha ay soo saaraan mashaariic la taaban karo oo la taaban karo oo aan ka faa'iideysan karno. Miis walba wuxuu ku shaqeeyay saxnimadan. ”
Maamulaha Isbadalka Magaalada IMM Kemal Duran wuxuu cadeeyay inay dhameeyeen aqoon isweydaarsiga iyadoo ay kaqeyb galayaan qeybo farabadan oo ay quseyso wuxuuna cadeeyay inay qaateen aqoon isweydaarsigaan wixii kadambeeyay 'khadka khaladka' waxayna u badaleen madal halka looga doodo soo jeedinta xalka loogu diyaar garoobayo dhulgariirka Istanbul.
Dhammaan mashruucyada iyo soojeedimaha xalka lagu soo saaray Aqoon-isweydaarsiga Dhulgariirka ee Istanbul waxaa soo weri doona IMM waxaana lala wadaagi doonaa qaybaha ay quseyso iyo dadweynaha.
Digniinta Musiibada ee Channel Istanbul! Dhulgariir La Filayey…
Qalabka Badbaadinta Gaadiidka ee la aasaasay
Kulanka Wadooyinka Tareenka ee Trabzon-Erzincan.
Waxa la kulmay in Erzurum, Turkey Winter Dalxiiska Platform
Mersin Logistics Platform si loo Tabobaro Khabiir Sare
Platform Haweenka TCDD, berrito Maalinta Hooyada…
Madaxweynaha Trabzon Railway Platform Ahmet…
Wadajirka Nidaamka Isgoyska
Shaqaalaha Wadada Tareenka 1 Maalin shaqo Joojin…
Ogeysiinta Ugaarsiga: Barxadda jaranjarada loogu talagalay dadka naafada ah…
Wadashaqeynta TÜVASAŞ ee Mashruucyada Nidaamka Raadinta Iftiinka Sakarya
P & O FERRYMASTERS Growth go'aansaday inuu Turkey iyo Bariga Dhexe
Iskuday la’aanta ayaa kusii socota khadka tareenka ee Samsun Sivas .. Tareenka Tijaabada ama Tareenka Kormeerka?
Takoorka togan ee lagula kaco haweenka ee gaadiidka ee Muğla
Gawaarida Sapanca Cable waxay keenaan Banaanbax! Ilaaliyaha ayaa sii wadaya ilaa mashruuca la joojiyo
Taageerada loo fidinayo Hay'adda YHT Duzce waxay ku kordhisaa ololaha Saxiixa
Başkentray Özgüneş Jooji Lama heli karo 7 Bilood
OSD Soojeedinta Dhiirrigelinta Gaariga ah ee Gawaarida Gawaarida ee OSD!